WAR DEG DEG AH: M/weyne Gaas oo shir gudoominaya Kulan xasaasi ah oo ay Golaha Xukuuamdiisu ku yeelanayaan Boosaaso, loogana hadlayo… – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Ganacsatada Qaadka ee Somalia oo ku dhawaaqay arin dhul gariir ku riday Kenya “Hada ayaan joojinaynaa Qaadkiinii” 12 hours ago
Madaxweyne caan ah oo xil uusan u qalmin wiil uu dhalay u magacaabay 12 hours ago
Wasiir ka tirsan dowladda Somalia oo codsi u diray madaxda Koonfur Afrika 12 hours ago
Home 2017 September W.Gudaha, Wararka Maanta WAR DEG DEG AH: M/weyne Gaas oo shir gudoominaya Kulan xasaasi ah oo ay Golaha Xukuuamdiisu ku yeelanayaan Boosaaso, loogana hadlayo…
WAR DEG DEG AH: M/weyne Gaas oo shir gudoominaya Kulan xasaasi ah oo ay Golaha Xukuuamdiisu ku yeelanayaan Boosaaso, loogana hadlayo…
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir gudoomin doona kulan ay yeelan doonaan xubnaha golaha Xukuumadiisa, oo ka dhacaya magaalada Boosaaso, kaas oo looga hadlayo arrimo xasaasi ah.
Kulanka golahan ayaa lafilayaa in looga wada hadlo arrimaha ku aadan Amniga, La dagaalanka Argagixisada, Mashaariicda socota, kuwa bilaabanaya, Xeerar cusub oo laga doodayo iyo Xaaladda nabadda ee gobalka Mudug.
Madaxweynaha Puntland ayaa iskugu yeeray golaha Wasiiradda magaalada Boosaaso, waxayna maalmihii ugu dambeeyey lahaayeen kulamo gaar-gaar ah oo ay uga hadlayaan xaaladdaha Amniga.
Wasiiradda Amniga iyo Arrimaha ee Puntland ayaa kulamadii ugu dambeeyey la qaadanayey Laamaha Amniga oo ay ka wada hadlayeen arrimaha ku saabsan amaanka.
Saraakiil ku dhaw dhaw shirarkan ayaa sheegaya in lasoo saari doono warsaxaafadeed ku aadan waxyaabaha laga wada hadlay, si gaar ahna waxaa diiradda loo saari doonaa xaaladda nabadda ee gobalka Mudug.
Madaxweynaha Puntland ayaa lafilayaa in uu todobaadka nagu soo aadan gaaro magaalada Muqdisho, oo uu kaga qeybgalayo shir ay leeyihiin Hogaamiyaasha Siyaasadda ee Soomaaliya.